ktmkhabar.com - चुरोटजत्तिकै हानिकारक हुन्छ चिनी !
चुरोटजत्तिकै हानिकारक हुन्छ चिनी !
एजेन्सी- स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै कुरा तपाई जान्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, महशुस गर्नुहुन्छ र केही तरिका तपाई प्रयोगमा पनि ल्याउनुहुन्छ ।
स्वास्थ्यसँग जोडिएका केही कुरा यस्ता पनि हुन्छन्, जसबारे तपाईलाई थाहा हुँदैन । तर थाहा हुनु जरुरी हुन्छ । किनकी यसले तपाईको स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको हुन्छ । जस्तै चिनीको प्रयोग ।
धुम्रपान जत्तिकै हानिकारक चिनी
खानेकुराबाट दुई प्रकारको सुगर प्राप्त हुन्छ-ग्लुकोज र फ्रुक्टोज । मह तथा पाकेका फलहरुबाट प्राप्त हुने गुलियोलाई फ्रुक्टोज भनिन्छ । शरीरको हरेक कोषलाई ग्लुकोजको आवश्यकता भए पनि फ्रुक्टोजको अधिक उपभोग शरीरकै लागि खतरा हुन्छ । तर फलफूल, मह, चकलेटमा प्रशस्त फ्रुक्टोज हुन्छ, जुन हाम्रो शरीरको रक्त नलीमा प्रवाहित हुन्छ ।
फ्रक्टोजलाई कलेजोले मात्र अर्गानिक परिवर्तन गरिदिन्छ र शरीरलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने ऊर्जाका लागि ग्लुकोजमा परिवर्तन गरी भण्डारण गर्छ । तर रगतमा बढी मात्रामा फ्रुक्टोज भण्डारण भएमा कलेजो मोटो हुदै जान्छ र बिस्तारै सामान्य रुपमा काम पनि गर्न छोड्छ र मुटुसँग सम्बन्धित विभिन्न रोग लाग्छ । तसर्थ मुटुसँग सम्बन्धित जुनसुकै रोगबाट बच्न धेरै गुलिया परिकार र फलफूल अत्यधिक सेवन नगर्नुहोस् ।